Firefox 11 ကိုနာရီအနည်းငယ်အတွင်းရနိုင်သည် Linux မှ
အဆိုပါအညီ ၏ပြက္ခဒိန် Mozilla ကနာရီအနည်းငယ်အကြာမှာငါတို့နှင့်အတူရှိလိမ့်မည် Firefox version 11 (y Thunderbird ကို ငါယူဆတယ်) ဒုံးပျံများလွှတ်တင်ရန်အားမပေးသောတိုးတက်မှုအချို့ရှိလိမ့်မည်။
ကျနော်တို့ပြီးသားတွေ့မြင်နိုင်သောအပြောင်းအလဲများအများစု Firefox 11.0 Beta ကို:
Firefox မှ Bookmarks, History နှင့် Cookies မှတင်သွင်းနိုင်သည် Google က Chrome ကို.
ယခုသုံးပါ Sync ကို, extension များကွန်ပျူတာအများအပြားမှတဆင့်ထပ်တူနိုင်ပါတယ်။
ထောက်ပံ့ စာသားအရွယ်အစား - ညှိ - ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု.
externalHTML ပိုင်ဆိုင်မှု ဒြပ်စင်များကိုထောက်ပံ့သည် HTML ကို.
ကုဒ်၏ syntax ကိုမီးမောင်းထိုးပြရန်, parser ကိုသုံးပါ HTML5 (# bug ကို 482921).
El စတိုင်အယ်ဒီတာ, web developer များရရှိနိုင်ပါသည်။
အ web developer များ အခုသူတို့တစ်တွေစာမျက်နှာတစ်ခုကြည့်ရှုနိုင်သည် 3D အသုံးပြုခြင်း စာမျက်နှာစစ်ဆေးရေး 3D မြင်ကွင်း.
စာမျက်နှာများပိုမိုလျှင်မြန်စွာ load နိုင်အောင် SPDY protocol ထပ်တိုးခဲ့သည်။#bug528288) ။
ယခု XMLHttpRequest HTML parsing ကိုထောက်ပံ့သည်.
ဖိုင်များကို IndexedDB တွင်သိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်။# bug ကို 661877).
တိုးတက်လာသော WebSocket အထောက်အပံ့။
အကယ်၍ Growl 1.3 သို့မဟုတ်ထိုထက်နောက်ကျလျှင် Firefox ရှိအသိပေးချက်များသည်မှန်ကန်စွာအလုပ်မလုပ်နိုင်ပါ။# bug ကို 91662).
ဒီဗားရှင်း fixedeta 1 တွင်သတ်မှတ်ထားသည့် bug များစာရင်း
ပိုမိုသိရှိလိုပါက Firefox 11: အင်္ဂါရပ်များ / ဖြန့်ချိသည့်ခြေရာခံ
ဒါကြောင့်ယခုငါတို့ဖိုင်များ upload လုပ်ဖို့စောင့်ဆိုင်းနိုင်ပါ တယောက်က FTP သို့မဟုတ်တရားဝင်ပစ်လွှတ်ပါ😀
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » နာရီအနည်းငယ်အတွင်း Firefox 11 ကိုရရှိလိမ့်မည်
အထူးသဖြင့် KDE နှင့် Nvidia driver တို့ဖြင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေမည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ ယခုအခါကျွန်ုပ်သည် KDE နှင့်အတူ Archlinux ပေါ်ရှိ Firefox နှင့်အတူယေဘူယျ vesa driver (စက်အဟောင်းတွင်) နှင့်ပြproblemနာမပေါ်ပါ။
OpenSUSE တွင်ကျွန်ုပ်ကို Pueesss, KDE နှင့် Nvidia မှပိုင်ဆိုင်သောကားမောင်းသူနှင့်ပြသမည်မဟုတ်။
သူတို့ကသူ့ကိုမတ်လ ၁၁ ရက်နေ့မှာမလွှတ်ပေးဘူးလား။
ohhh အလွန်ကောင်းသောအချက်အလက်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည် ... ထို့နောက်ထွက်လာရန်စောင့်ဆိုင်းကြပါစို့ .. 🙂 ...
PS: User-agent သည်မမှန်ကန်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ xfce တွင်ရှိနေဆဲ ဖြစ်၍ Windows para အတွက် Midori ရှိသည်ဟုသူတို့မထင်ကြပါ။
ကောင်းပြီ, ငါနှစ်ခုရေအကြားကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှာတွေ့ ... တဖကျတှငျ (အဟောင်းတ ဦး တည်း) ကစီမံကိန်းကိုနေ့တိုင်းအသက်ရှင်လျက်နှင့်ဖြစ်ပေါ်နေသောကြောင်းဆိုလိုတာကငါ့ထံသို့ကြီးစွာသောသတင်းနဲ့တူပေမယ့်အခြားပေါ်တွင်ငါကျွေးမွေးရဖို့စတင်တာပါဗားရှင်းအသစ်နှင့်အတူတက်ကျွေးမွေးရ အဲဒါကိုအနီးကပ်သက်ဆိုင်ရာ add-on ကို updates များကိုအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ Firefox 8 နှင့် Key Manager ကိုက်ညီရန်လအနည်းငယ်ကြာပြီးနောက်သူနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်သည်၊ FF ၏ဗားရှင်း9ထွက်ပေါ်လာပြီးနောက် ၁၀ ခု ... ကျွန်ုပ်သည်၎င်းနှင့်သဟဇာတဖြစ်ရန်စောင့်နေဆဲဖြစ်သည်။ ဥပမာတစ်ခုအနေနှင့်၊ ကျွန်ုပ်၌ "အမြဲတမ်း" ပိတ်ထားသော plugins များစာရင်းရှိသည်၊ ၎င်းတို့သည် FF ကဲ့သို့နှုန်းနှင့်ထပ်တူပြုရန်စောင့်ဆိုင်းနေသည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါက Mozilla ရဲ့အမှားမဟုတ်ပါဘူး (သို့မဟုတ်၊ plugin ထုတ်လုပ်သူများထံမှအချို့သောကတိကဝတ်များကိုမတောင်းဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်) ဒါပေမယ့် developer များ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သူတို့ကသူတို့ရဲ့အလုပ်တွေကို "gratis et amore" ကိုကမ်းလှမ်းပြီးတစ်ပြားတစ်ချပ်မှမပေးဘဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်သုံးလို့ရမယ်ဆိုတော့ငါလည်းမကျေမနပ်ညည်းညူနေတယ်။
နောက်ဆုံးတွင်အသုံးပြုသူအနေဖြင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်။ အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်သည်လူသားတစ် ဦး ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်တိုင်တန်းပိုင်ခွင့်ရှိသော်လည်း၎င်းကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိကျင့်သုံးရမည်။ ကောင်းစွာမွေးဖွားခြင်းသည်မည်သူဖြစ်သည်ကိုကျေးဇူးတင်မည်မဟုတ်။ ငါပရိုဂရမ်ကိုကျွန်တော်လိုချင်သလောက်လိုလိုသိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကူညီလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်နေ့တိုင်းတော့ကျွန်တော်မမီနိုင်တော့ဘူးလို့ခံစားရတယ် ...
ယခုငါတွေးမိ .... ငါဘာမှမတောင်းဘဲမဖြေရှင်းနိုင်ရင်ဒီပစ္စည်းအားလုံးကိုငါဘာကြောင့်လွှတ်လိုက်တာလဲ။ ...
«ယခုငါတွေးမိသည်။ ငါဘာမှမတောင်းဘဲမဖြေရှင်းနိုင်ရင်ဒီအရာအားလုံးကိုငါဘာကြောင့်လွှတ်ပေးလိုက်တာလဲ။ »
Haahaha .... ဘာလို့ Google Chrome ကိုပြောင်းဖို့စဉ်းစားနေတာလဲ၊
Chrome အရမ်းကောင်းပေမယ့် ... သူလျှိုလုပ်တာကကျွန်တော့်ကို xD သိပ်သဘောမကျဘူးဆိုတာငါမသိဘူး
Nope ... ငါ Chromium နဲ့ FireFox ကိုသုံးတယ်။ ဒါပေမယ့်အဲ့တာကိုငါမကြိုက်ဘူး။
Man ပြtheနာကိုကျွန်တော်နားလည်သည်။ သို့သော်၎င်းသည် add-ons ၏ developer များပေါ်တွင်များစွာမူတည်သည်။ Mozilla တွင်ဤပြissueနာကိုဖြေရှင်းရန်စီမံချက်တစ်ခုရှိပြီးဖြေရှင်းချက်တစ်ခုမှာ add-ons များအားလုံးကိုပုံမှန်အားဖြင့်သဟဇာတဖြစ်စေရန်ဖြစ်သော်လည်းဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်သည်။ ငါအကြံပြုတာကတော့ဗားရှင်းတွေအကြားအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲမှုမရှိရင် (၃ နဲ့ ၄ ကြားကကဲ့သို့) သင်လိုက်ဖက်တဲ့ add-ons တွေကိုသင်ကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်တယ်၊ xpi ဖိုင်ကိုကူးယူလို့မရဘူး။ ငါလုပ်ခဲ့တာတွေကိုကြာအောင်လုပ်ဖို့ပါ။ ၊ သင်က၎င်းကို compressed ဖိုင်အဖြစ်ဖွင့်ပြီး၊ install.rdf ဖိုင်ကိုလိုင်းတွင်တွေ့ရသောတန်ဖိုးကိုပြောင်းလဲပစ်သည်။
သင်နှင့်သက်ဆိုင်သောတန်ဖိုးကိုထည့်သွင်းပါ။ ကျွန်ုပ်သည် Thunderbird နှင့် Firefox နှစ်ခုလုံးတွင်ဤနည်းဖြင့်ကျွန်ုပ်ထည့်သွင်းထားသော add-ons များနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်ပြproblemနာမျှမရှိခဲ့ပါ။
အိုကေ Errata, ဒီမေးခွန်း၏လိုင်းမှာ
သင့်တွင်ခရိုမီယမ် (သို့) သံ) ရွေးချယ်စရာရှိသည်
ငါတို့ရှိသမျှသည်ဂူဂဲလ်၊ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်နှင့်အခြားအရာများကို အသုံးပြု၍ သူလျှိုလုပ်နေကြသည်။ Courage မှဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုသင်မတွေ့ပါကနှစ်များတစ်လျှောက်ဂူဂဲလ်မှကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြုလုပ်ထားသောပရိုဖိုင်ကိုကျွန်ုပ်တို့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း (တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း) မြင်နိုင်သည်။
လုံခြုံမှုရှိသည်ဟုထင်သူမည်သူမဆို (ပုံမှန်အားဖြင့်သူတို့၏မူလစာမျက်နှာရှိ "Google Spy" ကိုယူဆောင်လာသည်) သည်အခြား browser (ဘရောက်ဆာ) ကိုသုံးခြင်းဖြင့်အခြားသူများကိုကြောက်ရွံ့နေသူမည်သူမဆိုသည်လိမ်ညာသူဖြစ်သည် (သတိလစ်သည်ဖြစ်စေ) မဟုတ်ဘူး) ။
ဒါမှမဟုတ် Chrome မှာကျွန်တော်တို့ကိုသူလျှိုလုပ်ထားတဲ့အထူးအရာတစ်ခုခုရှိသလား။ သို့ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်မသိသောသူနှင့်ကျွန်ုပ်နှင့်တွေ့ဆုံလိုကြောင်းကျွန်ုပ်ကိုပြောပြပါ။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီဟာ Mozilla ရဲ့အမှားမဟုတ်ပါဘူး (သို့မဟုတ်၊ add-on ထုတ်လုပ်သူများထံမှအချို့သောကတိကဝတ်များကိုမတောင်းဆိုပဲဖြစ်နိုင်သည်) ဒါပေမယ့် developer များ။
ငါဆန့်ကျင်ဘက်ပဲထင်ပါတယ်။ Mozilla သည်နှစ်စဉ်ဒေါ်လာသန်း ၃၀၀ ၀ င်ငွေရနေသော်လည်း developer များသည်အမှားမကင်းပါ။ Extension များကိုဖန်တီးသူများက Mozilla သည်တစ်နေ့တွင်အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲသူတို့၏နံပါတ်ကိုတိုးမြှင့်လိုသောကြောင့်နိုးလာသည်ကိုအပြစ်မတင်သင့်ပါ။ Mozilla မှာဘတ်ဂျက်ကြီးကြီးမားမားရှိတဲ့အတွက်ဒီမအောင်မြင်တဲ့စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးတွေကို ၀ င်ရောက်ဖို့ဘာမှမကုန်ကျပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် developer တွေကနောက်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ပါ၊
သင်မကျေနပ်သောကြောင့်ထိုအရာများကိုသင်သည်းမခံချင်တော့ဘဲဒေါသထွက်ကာအရာရာပြောင်းလဲသွားသည်။ သို့သော်သင်၌ (မှားယွင်းသော) ခံစားချက်ရှိသည် (သင်သည်သင်၏မကျေနပ်မှုကိုတွေးတောခြင်းအတွက်) ခွင့်လွှတ်မှုနှင့်ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုတောင်းခံရန်လိုအပ်သည်။ ) "ရောင်းသူဖို့" မျက်စိ၌။
HADUKEN !!! ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပြnoနာမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်
danilo palomino အားပြန်ကြားပါ
စိတ်ဝင်စားဖွယ်သတင်းများ ... (:
buu ငါဒုံးကျည်များကိုချစ်: S
ငါတို့ရဲ့ကစားသမားထဲမှာဘာအသံထွက်သလဲ။ အပိုင်း 2